Jose Mourinho Oo Saadaaliyay In Lionel Messi & Cristiano Ronaldo Ayna Ku Guulaysan Doonin Abaal Marinta Ballon d'Or - Gool24.Net
Jose Mourinho Oo Saadaaliyay In Lionel Messi & Cristiano Ronaldo Ayna Ku Guulaysan Doonin Abaal Marinta Ballon d’Or
Jose Mourinho ayaa aaminsan in sanadkan ayna Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo ku guulaysan karin abaal marinta xidiga sanadka aduunka ugu fiican ee Ballon d’Or.
Jose Mourinho ayaa ku dooday in fashilkii kooxaha Juventus iyo Barcelona ee tartanka UEFA Champions League uu sabab u noqon doono in Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo ayna ku guulaysan karin Ballon d’Or.
Markii uu Cristiano Ronaldo ka hadhay Champions League ee uu wali Messi tartanka ku sii jiray, waxa uu Mourinho sheegay in Messi uu abaal marintan ku guulaysan doono.
Laakiin markii uu arkay Lionel Messi oo si xun looga so cidhibtiray UEFA Champions League waxa uu aaminsan yahay in xidig kale uu sanadkan markale abaal marinta Ballon d’Or ku garaaci doono Messi iyo Ronaldo.
Kadib markii ay muddo toban sanadood ah Messi iyo Ronaldo ay min shan jeer ku soo guulaysteen abaal marinta Ballon d’Or ayuu Luka Modric sanadkii la soo dhaafay noqday xidigii ugu horeeyay ee labadan ciyaartoy soo dhex galay.
Jose Mourinho oo abaal marinta Ballon d’Or iyo fursada Messi iyo Ronaldo ka hadlaya ayaa yidhi: “Kabta dahabka ah, ciyaartoyga aduunka ugu fiican- waxaa waajib ku ah in uu guulayste yahay. Tayo badan, hibo badan , koob la’aan taas ma shaqayso”.
“Waqti xaadirkan, haddii ay Juventus ku guulaysan lahayd Champions league, waxaynu sheegi lahayn, Ronaldo ayaa ku gulaysan doona kubbada dahabka ah” ayuu Mourinho hadalkiisa raaciyay.
Mourinho oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: “Haddii ay Barcelona ku gulaysan lahayd Champions League, oo ay ku gulaysteen horyaalka Spain, hadda ay tagayaan Copa America, waxaa kabta dahabka ah yeelan lahaa Messi”.
Laakiin Mourinho oo qiraya in Messi iyo Ronaldo ay kubbada dahabka ah ee Ballon d’Or ka galaafan doonto murugadii Champions League ayaa yidhi: “Sababtoo ah iyaga waxaa laga saaray tartanka kubbada cagta Yurub, haddaba waxaynu ka hadlaynaa ayaa ku guulaysan doona, sababtoo ay iyagu (Messi iyo Ronaldo) kuma guulaysan doonaan”.
“Taasi waa sababta aan markasta u sheego in la joogteeyo guulaha iyo guulaha muhiimka ah” ayuu Jose Mourinho hadalkiisa sii raaciyay.
SIDOO KALE AKHRISO: Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ee Ay Maanta Oo Jimce Ah Qoreen Wargeysyada Yurub
Dhinaca kale Mourinho ayaa wax laga cadhood ku tilmaamay in ayna wali Messi iyo Ronaldo iskaga hor iman finalka Champions League wuxuuna yidhi: ” Waxaan filayaa in ay cadho u tahay kuwa kubbada cagta jecel in ayna waligood soo helin finalka Champions League oo u dhexeeya Messi iyo Ronaldo”.
“Ugu dhawaan waqtiyo badan ayaa xaqiiq ahayd, laakiin waligeed may dhicin. Anigu markastaba waxaan ka fikiraa in ay iyaga cadaalad daro ku tahay”.